Iza no afaka ho ray aman-dreny ao Frantsa? · Global Voices teny Malagasy
Mihoatra noho ny resaka lalàna ranofotsiny no resaka eto
Voadika ny 15 Marsa 2021 16:49 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, বাংলা, Español, Français, Ελληνικά, Deutsch, English
Graffiti mitaky ny PMA (‘procréation médicalement assistée’ na ‘Fahafahana miteraka tohanana ara-medikaly’) ho azon'ny rehetra sitrahana, Parisy, 2018. Sary an'i Ittmostt tao amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Efa taompolo marobe no nisy ireo fianakaviana izay tsy tafiditra anatin'ny lasitra cisgenre “nentindrazana” ifanambadian'ny tsy mitovy taovam-pananahana ary niha-nahazo fanekena niandalana tao anaty fiarahamonina frantsay. Kanefa, ny fanekena ny maha-ankohonana sy ny fahazoana ireo fikarakaràna momba ny fahafahana miteraka dia mbola ny lalàna no miantoka azy, toedraharaha iray izay manasongadina ny tsy fitoviana rehefa tonga ny fotoana hanorenana ankohonana.
Ho ezaka hanatanteraka ny fampanantenany nandritra ny fampielezankeviny tamin'ny 2017, nanao tsindry ny filoha frantsay Emmanuel Macron hampandany tolodalàna iray “hatramin'ny lohataona 2021”, izay ny tena zavadehibe ao anatiny dia ny fanomezana alàlana ireo vehivavy tokantena sy ireo vehivavy mifanambady ho afaka hanao ny IVF sy ny insemination artificielle (fitsaihana aterin-tànana). Saingy tsy ela akory izay dia nolavin'ny antenimieran-doholona ity fanovàna goavana ity, nandiso fanantenana mpikatroka marobe tao anatin'io ady naharitra ela momba ny lalàna io. Ny sasany manantena hoe mety mbola holanian'ny solombavambahoaka ihany ilay tolodalàna.
Ity no azo antoka: ho an'ireo manampahefana ao Frantsa, tsy ny rehetra no afaka hanana vintana ho lasa ray aman-dreny. Voalohany, ireo vehivavy tokantena dia “marefo” no anasokajian'ny sasany amin'ireo mpanao lalàna ao amin'ny Antenimieran-Doholona azy, mba tsy hilazana ny tsy firaharahiana atao an'ireo mandà ny toetra niterahana azy (sarindahy/sarimbavy), izay zara raha asiana jery ao anatin'ny drafitra nasiônaly anoherana ny fanavakavahana an'ireo LGBT+. Toy ny mahatonga hisaina hoe ao Frantsa, tsy ara-drariny ny fanirian'ny olona sasany mba hiteraka ary mbola entina toy ny tsy natoraly, ka voatery ireo vehivavy maro tokantena sy ireo olona LGBTQI+ mandeha any ivelany mandra-piandry izay fanapahankevitra horaisin'ny fireneny hiarovana ny fahafahan-dry zareo miditra amin'ny fiterahana tohanana ara-medikaly (PMA).
Teboka iray maharary ho an'ireo vondrona tahàka ny La Manif Pour Tous, izay manohitra ilay tolodalàna, dia ny fahafahan'ireo mpivady vavy samy vavy (lesbiennes) na vehivavy tokantena hiteraka zaza tsy manan-dray, araka izany “dia manakana ireo ankizy tsy ho afaka hiditra hahafantatra izay tena loharano niaviany.” Afaka vahàna mora foana ny ahiahy tahaka izany momba ny fahasambaran'ireo ankizy, amin'ny alàlan'ny fanolorana tolodalàna momba ireo fanolorana atao ‘semi-anonymes’ (fanamarihan'ny mpandika: fanolorana ranonaina, atao amin'ny fomba ahitàna taratra kely ihany ny mombamomba ny mpanolotra), ka amin'izay fotoana izay dia mila fepetra vao azo idirana ny mombamomba ilay mpanome, fa tsy hoe sakànana ireo vehivavy tsy hahazo miditra amin'ny PMA.
Ny tena olana, anefa, dia any amin'ny tahotr'ireo lehilahy hoe mety ho very ny toerany ao anatin'ny fiarahamonina no mipetraka. Ireo mpanohitra an'ilay tolodalàna manombana hoe ny fanomezana alàlana ireo vehivavy ho afaka manao fiterahana tsy misy idiran'ny lehilahy mihitsy, afa-tsy ilay fanolorana ranonaina, dia toy ny fankatoavana ihany koa ny hoe “lasa ray fanàry (disposable) ry zareo.” Lasa ny antom-pisian'ny fiarahamonina voarindra manodidina ny fisian'ny ray sy reny mihitsy no tandindonindoza.
Takon'ny La Manif Pour Tous ihany koa ny resaka vesatra ara-tsianefa mitambesatra sahady amin'ireo vehivavy raha ny fahafahana miteraka sy fanabeazana ny ankizy no resahana. Baptiste Beaulieu, Frantsay mpitsabo, dia manipika ao anatin'ireo bitsika nalefany fa anatina tranga marobe, ny vehivavy no tena mikarakara bebe kokoa ny ankizy, kanefa “vao miainga kely fotsiny eto ny hoe PMA ho an'ny vehivavy rehetra (ao amin'ny Twitter), dia iny ianao mahita andian-dehilahy miaro ny zon-dry zareo hametraka ny maha-ray azy, izay mazàna omeny ho andraikitry ny hafa ao anatin'ny fiainany tena izy.” Mety hisy hiteny eo, somary arahana eso ihany, hoe: mahasambatra an'ireo mpivady lahy sy vavy ve ny miteraka? Tsy anjarantsika io fanapahankevitra io, ary izany no ezahantsika porofoina eto.
Raha te-“ho tsara toerana” amin'ny fananganana zaza dia tsy maintsy manana fahamarinan-toerana ara-bola ny mpivady, manana fomba fiaina mafy orina tsy miovaova, ary raha azo atao dia mpivady tsy mitovy fananahana, fotsy ary tsy manana kilema, hoy ny fanadihadiana iray vao haingana momba ny fomba fanao amin'ny fananganana zaza ao Frantsa. Ny fiasan'ireo mpiasa sôsialy dia ampifanarahany amin'izay heverina ho “ny tsara indrindra” ho an'ny ankizy. Mpisehatra malina no mampihatra ny lalàna, izay mandray fanapahankevitra misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainana tena manokan'ireo olompirenena.
Mbola mitoetra ho mpitahiry ny nentindrazana ny lalàna frantsay momba io olana io, mitazona ny maha-lohalaharana ny ara-biôlôjika. Olona roa nandray anjara tamin'ny fitondràna ny anjara tarazo avy aminy ilaina mba hamoronana zaza no eken'ny lalàna ho ray aman-dreny, izany hoe ilay olona nitondra am-bohoka sy niteraka ary ilay lehilahy vadiny na tonga manoloana ny mpiadidy fiankohonana manambara fa izy no rain'ny zaza. Ireo tranga hafa rehetra, miainga avy amin'ny fiaraha-miadidy ny zaza sy ny ankohonana narafitra avy amina mpivady samy efa nanana ny zanany, ka hatramin'ireo ankohonana LGBTQ+, dia mila vahàna amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fanitsiana vitsivitsy atao amin'ny lalàna, izay amin'ny ankapobeny dia misy idiran'ny dingana fananganana.
Midika mazava izany fa rehefa manapaka hevitra ny olona telo na efatra fa hiditra amin'ny làlan'ny fiarahana mizaka adidy, roa monja amin'izy ireo no raisina ho toy ny ray aman-dreny eo anoloan'ny lalàna, ka mandra-pametraka ny antontan-taratasy fananganana, ahilika tanteraka tsy ho anatin'ny sary ny ambiny. Miatrika olana tsy misy hafa amin'izany ireo vehivavy mifanambady satria izay reny niteraka ihany no azo soratana ao anatin'ny kopiam-pahaterahana. Amin'ireny tranga ireny, raha toa misy fisarahana mialohan'ny fahavitàn'ny dingana fananganana, ho azo ahilika tanteraka hivoaka amin'ny fiainan'ilay zaza ny iray amin'ireo mpivady.
Noho ny fisian'ireo ankohonana “tsy mahazatra” lasa mihamaro dia maro no hita sy manandra-peo, an-dalam-pivoarana ny famaritàna ara-tsôsialy entina mamaritra ny fotokevitry ny atao hoe ankohonana. Eny an-kianja, mitatra ny valan'ilay fotokevitra, saingy ananan'ireo mpitsara sy mpanao lalàna ny fahefana hametra (hangihy) azy ireny, mametraka sisintany manavaka izay rariny ho antsoina hoe ray aman-dreny. Mihoatra noho ny resaka lalàna ranofotsiny no resaka eto: na ho lany aza ilay tolodalàna izay mikaroka ny làlany eny an-dalantsaran'ny governemanta amin'izao fotoana izao, mbola lavitra ny làlan-kizorana mba hanekena tanteraka ny fahasamihafana mandrafitra ny ankohonana frantsay amin'izao fotoana izao.